၁၄ နှစ်အရွယ် ၈ တန်း ကျောင်းသူလေး အား ပထွေး ဖြစ်သူက အဓမ္မပြုကျင့် ..! - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / ၁၄ နှစ်အရွယ် ၈ တန်း ကျောင်းသူလေး အား ပထွေး ဖြစ်သူက အဓမ္မပြုကျင့် ..!
၁၄ နှစ်အရွယ် ၈ တန်း ကျောင်းသူလေး အား ပထွေး ဖြစ်သူက အဓမ္မပြုကျင့် ..!
Apann Pyay 5:05 PM ပြည်တွင်းသတင်း Edit
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ် အစင်ကျေးရွာ နယ်မြေ ၉ အောင်ဆန်းရပ်ကွက်မှာ ၁၄ နှစ်အရွယ် ၈ တန်း ကျောင်းသူကို ပထွေး ဖြစ်သူက အဓမ္မပြုကျင့်မှု နဲ့ပတ်သက်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ တိုင်ကြားချက်အရ ဇွန် ၂၂ နေ့မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ က ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့် လိုက်ပါတယ်။
မယားပါ သမီးဖြစ်သူကို ပြီးခဲ့တဲ့ မေ ၁၂ နဲ့ ဇွန် ၉ ရက်မှာ ၂ ကြိမ်တိုင် အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ၈ တန်းကျောင်းသူလေးရဲ့ မိခင်ဟာ မေလ ၁၂ ရက်နေ့က ဆေးရုံ မှာ လူနာညစောင့် သွားအိပ်ပေးနေချိန် အိမ်မှာ သမီးဖြစ်သူ တူမဖြစ်သူနဲ့ ပထွေးဖြစ်သူ ညိုဝင်းတို့ ၃ ဦးကျန်ခဲ့တယ်လို့ ရဲမှတ်တမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီနောက်မှာတော့ ပထွေး ဖြစ်သူက မယားပါ သမီး ဖြစ်သူကို ထမင်းစားဖို့ဆိုပြီး ဘဲဥကြော်ခိုင်းလို့ အိပ်ရာက ထလာစဉ် ပါးစပ်ပိတ်ပြီး အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း၊ မုဒိမ်းကျင့်တာကို တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ တူမ ဖြစ်သူကိုလည်း အခြားသူတွေကို ပြန်မပြောဖို့ ခြိမ်းခြောက်တာဖြစ်ပြီး ဇွန်လ ၉ နေ့ကလည်း မိခင် ဖြစ်သူ ပဲပြုတ်ရောင်းသွားစဉ် ပထွေး ဖြစ်သူက နေအိမ် အိမ်ခန်းအတွင်း ၀င်ရောက်ပြီး အဓမ္မတကြိမ်ပြုကျင့်ခဲ့သေးကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းအရ သိရပါတယ်။
“လက်ရှိနစ်နာတဲ့ ၈ တန်းကျောင်းသူ နဲ့ တရားခံ ကို ဆေးစစ်ဆေးမှုခံယူထားသော်လည်း ထင်မြင်ယူဆချက်ပြန်လည်ရ ရှိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ မုဒိမ်းမှု မြောက်လား မမြောက်လား ဆိုတာကိုလည်း အတည်ပြုမပြောနိုင်သေးဘူး။ စွပ်စွဲခံရသူ ညိုဝင်းကို ရေးမြို့မရဲစခန်း (ပ)၁၆၄/၂၀၁၇ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်-မ၃၇၆ နဲ့အမှုဖွင့် အရေးယူစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်” လို့ ရေးမြို့မရဲစခန်းက ဒုရဲမှူးစိုးမွန်က ပြောပါတယ်။
မှနျပွညျနယျ၊ ရေးမွို့နယျ အစငျကြေးရှာ နယျမွေ ၉ အောငျဆနျးရပျကှကျမှာ ၁၄ နှဈအရှယျ ၈ တနျး ကြောငျးသူကို ပထှေး ဖွဈသူက အဓမ်မပွုကငျြ့မှု နဲ့ပတျသကျပွီး မိခငျဖွဈသူရဲ့ တိုငျကွားခကျြအရ ဇှနျ ၂၂ နမှေ့ာ ရဲတပျဖှဲ့ က ဖမျးဆီးအမှုဖှငျ့ လိုကျပါတယျ။
မယားပါ သမီးဖွဈသူကို ပွီးခဲ့တဲ့ မေ ၁၂ နဲ့ ဇှနျ ၉ ရကျမှာ ၂ ကွိမျတိုငျ အဓမ်မပွုကငျြ့ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဖွဈစဉျမှာ ၈ တနျးကြောငျးသူလေးရဲ့ မိခငျဟာ မလေ ၁၂ ရကျနကေ့ ဆေးရုံ မှာ လူနာညစောငျ့ သှားအိပျပေးနခြေိနျ အိမျမှာ သမီးဖွဈသူ တူမဖွဈသူနဲ့ ပထှေးဖွဈသူ ညိုဝငျးတို့ ၃ ဦးကနျြခဲ့တယျလို့ ရဲမှတျတမျးမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
ဒီနောကျမှာတော့ ပထှေး ဖွဈသူက မယားပါ သမီး ဖွဈသူကို ထမငျးစားဖို့ဆိုပွီး ဘဲဥကွျောခိုငျးလို့ အိပျရာက ထလာစဉျ ပါးစပျပိတျပွီး အဓမ်မပွုကငျြ့ခဲ့တာ ဖွဈကွောငျး၊ မုဒိမျးကငျြ့တာကို တှရှေိ့ခဲ့တဲ့ တူမ ဖွဈသူကိုလညျး အခွားသူတှကေို ပွနျမပွောဖို့ ခွိမျးခွောကျတာဖွဈပွီး ဇှနျလ ၉ နကေ့လညျး မိခငျ ဖွဈသူ ပဲပွုတျရောငျးသှားစဉျ ပထှေး ဖွဈသူက နအေိမျ အိမျခနျးအတှငျး ဝငျရောကျပွီး အဓမ်မတကွိမျပွုကငျြ့ခဲ့သေးကွောငျး ရဲမှတျတမျးအရ သိရပါတယျ။
“လကျရှိနဈနာတဲ့ ၈ တနျးကြောငျးသူ နဲ့ တရားခံ ကို ဆေးစဈဆေးမှုခံယူထားသျောလညျး ထငျမွငျယူဆခကျြပွနျလညျရ ရှိခွငျးမရှိသေးပါဘူး။ မုဒိမျးမှု မွောကျလား မမွောကျလား ဆိုတာကိုလညျး အတညျပွုမပွောနိုငျသေးဘူး။ စှပျစှဲခံရသူ ညိုဝငျးကို ရေးမွို့မရဲစခနျး (ပ)၁၆၄/၂၀၁၇ ရာဇသတျကွီးပုဒျ-မ၃၇၆ နဲ့အမှုဖှငျ့ အရေးယူစဈဆေးဆောငျရှကျနပေါတယျ” လို့ ရေးမွို့မရဲစခနျးက ဒုရဲမှူးစိုးမှနျက ပွောပါတယျ။